PlayBox, safidy tsara indrindra amin'ny PopCorn, saingy tsy misy Jailbreak | Vaovao IPhone
Miaraka amin'ny fametrahana lalàna mifehy ny fananana ara-tsaina vaovao, na ny tahan'ny Google miankina amin'ny fomba fijerinao azy, ny pejin-tranonkala rehetra misy domicile ao Espana ary nanolotra rohy ho an'ny fisintomana na fijerena atiny, tsy maintsy nanova ny fomba fitadiavam-bola izy ireo. Sahala amin'ny Series Pepito, Series Ly dia navadika ho tambajotra sosialy ho an'ireo tia horonantsary sy sarimihetsika, ary najanon'izy ireo ny famoahana rohy.
Ho an'ireo mpampiasa rehetra izay, raha tsy ampy ny famatsiana any Espana, dia mila mampiasa Internet, manana ny PopCorn ho safidy lehibe indrindra izahay, izay efa noresahintsika teo aloha, saingy miaraka amin'ny fanavaozana farany an'ny iOS dia mila mampiasa ny Jailbreak isika afaka mankafy an'io serivisy tena tsara io. Saingy satria tsy ny mpampiasa rehetra no vonona ny Jailbreak ny fitaovany, dia azontsika atao ny mampiasa azy PlayBox, klioba horonan-tsary vaovao ahafahantsika mahita ny sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika farany alaina na jerena.
Toy ny mahazatra an'ireo karazana fampiharana ireo, amin'ny teny anglisy ary manana katalaogy be dia be, izay ahafahantsika mahita sarimihetsika, andian-tsarimihetsika, sarimiaina ary sarimiaina misaraka. Azontsika atao ihany koa ny mikaroka araka ny karazana sarimihetsika tadiavintsika tamin'izany fotoana izany, na fihetsika, hatsikana, tantara an-tsehatra, fiahiahy, nofinofy ... na fikarohana sarimihetsika manokana.
Ho fanampin'izany, afaka misafidy ny kalitaon'ny streaming ihany koa isika, fa ny ankamaroany dia misy amin'ny HD TO hijerena na hisintomana. Io dia ahafahantsika manampy dikanteny amin'ny fiteny rehetra. Toy ny mahazatra ny ankamaroan'ny atiny dia amin'ny fiteny tany am-boalohany, noho izany dia fomba tsara hamelombelona ny fitenintsika na hianarana bebe kokoa. Na raha tia andian-tsarimihetsika amin'ny endriny voalohany ianao, toa an'i Luis Padilla mpiara-miasa amiko dia mety ity fampiharana ity.
Endri-javatra iray ananan'ny PopCorn dia ny mety sakana ny fidirana amin'ny kely indrindra amin'ny trano mampiasa kaody hidy. Na dia azo apetraka amin'ny rindrambaiko mbola tsy nigadra aza ny rindranasa, mazava ho azy fa tsy ho hita ao amin'ny App Store ity fampiharana ity. Raha hametraka azy io dia mila mitsidika ny tranokalan'i Playbox ary kitiho ny kisary hita eo ambany miaraka amin'ny kisary App Store.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » PlayBox, safidy tsara indrindra amin'ny PopCorn, saingy tsy misy Jailbreak
pedrosnif dia hoy izy:
Salama namana, Misaotra anao nahita matetika! Taorian'ny nialan'ny andiany l sy ny ipad dia nalemy ...
Na eo aza izany dia manana fisalasalana aho. Voalohany indrindra dia nitady azy tao amin'ny fivarotana fampiharana aho ary tsy tao izy. Avy eo rehefa misintona azy avy amin'ny rohy ao amin'ny tranokalany (ny application) dia misintona izy io, saingy misy hafatra iray manontany ahy raha matoky ilay mpamorona aho.
Mazava ho azy fa tsy alaina ao amin'ny fivarotana app izany. Ahoana no nanaovan'izy ireo izany nefa tsy nisy havandra? Afaka matoky izany ve isika?
Mamaly an'i pedrosnif
Ralehilahy ... misy atahorana foana ireo zavatra ireo ... ary ho an'ireo rehetra manome lanja na manonitra na tsia. Amin'ny ankapobeny dia tsy misy vaovao milaza fa mametraka karazana malware.
Elmer homer dia hoy izy:
Sintomy fotsiny izany avy amin'ny lynk izay hita eo ambanin'ny mari-pamantarana Appstore na Google, mazava ho azy, avy amin'ny fitaovana tianao hametrahana azy ary voila!
Valiny tamin'i Elmer Homer
Manaiky aho fa rehefa manambady ny iray dia mihevitra ny mety hametrahana azy. Raha ny amiko dia tsy nataoko izany noho ireto manaraka ireto:
- manondro fa ny fisintomana dia vita avy amin'ny App Store, izay diso ka efa manomboka mandainga izy ireo mba ampidininay.
- Ny asa tafiditra amin'ny fitantanana ity rindranasa ity dia goavana ary mitera-doza ho an'ny mpamorona noho ny resaka piraty. Tsy mino aho fa noho ny fitiavana zavakanto no nanaovan'izy ireo izany. Raha tsy manefa vola amin'ny fampiharana na amin'ny atiny izy ireo, dia hahazo tombony amin'izany. Raha tsy manaiky izy ireo dia hanao zavatra izay tsy fantatsika.
Mijere sarimihetsika tsara
MagicColors: ampanjifaina ny efijery hidin-trano sy ny Springboard (Cydia)